Fibatana fonjamby – Andriantsitohaina Eric - ewa.mg
News - Fibatana fonjamby – Andriantsitohaina Eric
“Lalaon’ny Nosy” intelo nisesy, nandrombaka medaly volamena hatrany ny atleta malagasy, ao anatin’ny taranja fibatana fonjamby, Andriantsitohaina Eric, sokajin- danja 56 kg. Nanomboka niditra eo amin’ity sehatra ity izy ny taona 2011, taona nandraisany anjara voalohany tamin’ny “Lalaon’ny Nosy” ary nahazoany avy hatrany medaly volamena telo. Tsy nitsahatra intsony izy nanomboka teo fa nivelatra, indrindra teo amin’ny sehatra afrikanina sy iraisam-pirenena. Efa nandray anjara ary nahazo medaly hatrany tamin’ ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika tany Maraoka ary tany Egypta. Tsy latsa-danja tamin’izany ny fifaninanana iraisam-pirenena, ny « Solidarity International Championships 2018 »,
nahazoany medaly volafotsy iray sy alimo iray, ny « Tournoi international » natao teto Maorisy ka nahazoany laharana voalohany. Mbola maro ny fahombiazana azon’i Eric, ankoatra ireo, ka anisan’izany ny “Lalaon’ny Nosy 2015” sy ny tamin’ity taona 2019, samy nahazoany medaly volamena telo avy. Tsahivina nitondra ny sainam-pirenena malagasy Andriantsitohaina Eric,nandritra ny lanonam-panokafana ity andiany faha-10 amin’ny “Lalaon’ny Nosy” ity, ny zoma 19 jolay lasa teo. Vonona ny hanome ny tsara hatrany i Eric ho an’ny taranja fibatana fonjamby malagasy sy ho an’ny firenena malagasy.
L’article Fibatana fonjamby – Andriantsitohaina Eric a été récupéré chez Newsmada.
Hotanterahina any Saint-Denis any La Réunion ny hetsika ara-toekarena ho an’ireo Nosy mivondrona ato amin’ny ranomasimbe indiana na ny « FEIOI », amin’ny 25 hatramin’ny 27 septrambra ho avy izao. Handray anjara amin’izany ireo mpandraharaha avy eto Madagasikara. Enina hetsy ariary eo ho eo ny saran’ny fandraisana anjara amin’izany. Mpandray anjara efajato no handrasana amin’io hetsika io. L’article Varotra iraisam-pirenena est apparu en premier sur AoRaha.
Ranomafana Ifanadiana : Maty voatifitry ny dahalo ny Kaomandin’ny borigadin’ny zandary
Lavo teo an-tanim-piadiana ny GPHC Rambeloson Heritiana Emilson, Kaomandin’ny borigady ao Ranomafana, omaly vao maraina, raha nanatanteraka iraka tany amin’ny tanana kely iray antsoina hoe Torotosy, ao amin’ny fokontany Tsaramandroso, kaominina Ranomafana, distrikan’Ifanadiana. Araka ny fanazavàna azo, ankoatra ny fitsidiham-paritra nataony, niaraka tamin’ireo miaramilany telolahy tany an-toerana, dia nisy ihany koa fanadihadiana natao tamin’ireo fianakaviana niharan’ny asan-dahalo tany. Tafandry tao amin’io tanana voalaza teo ambony ireo zandary ireto ny alin’ny talata hifoha alarobia teo. Tamin’izay indrindra no nisy antso vonjy tany ho any. Nanafika ny dahalo ! Nitsangana avy hatrany ity mahery fon’ny firenena ity, niezaka niaro ireo olona voatafika. Vao nivoaka anefa dia bala maromaro no niantefa teny aminy, nandavo azy avy hatrany. Lasan’ireo dahalo ihany koa ambonin’izay ny basy « kalach » teny aminy, niaraka tamin’ny fitoeram-bala roa izay voasesika bala 60 isa. Na dia teo aza ny fahalavon’ilay lehibeny izay dia niezaka nanohitra ireto andian-dahalo izay tombanana ho tafakatra any amin’ny 50 lahy mahery any ho any ireo zandary telo sisa. Tamin’io fotoana io dia tapitra nandositra avokoa ireo mponina teo an-tanana. « Sady niala tamin’io toerana io ireto zandary no nifanandrina ary niezaka naka toerana azo antoka kokoa ahafahany miaro tena sy miatrika ny fifandonana. Taorian’izay vao afaka niantso namana izy ireo rehefa tsy sahy nanatona azy ireo intsony ireo jiolahy ka tonga ireo zandary maromaro». Marihana hoy ny vaovao fa tanana tokony ho adiny roa, mandeha an-tongotra miala avy an-tampon-tanan’i Ranomafana ity toerana nisian’ny fifandonana, nahafaty zandary ity. Ka na dia teo aza ny fikirizan’ireo zandary namonjy ny namany dia efa tapitra nitsoaka, nihazo ny ala mikitroka tany Ambalakindresy ireo olon-dratsy. Na izany aza mbola mitohy ny fikarohana, ny fanarahan-dia ary ny savahao ataon’ireo tompon’andraikitra. Nentina nihazo an’i Ranomafana moa ny vatana mangatsiakan’Itompokolahy, izay namela mananon-tena sy kamboty efatra mirahalahy. m.L L’article Ranomafana Ifanadiana : Maty voatifitry ny dahalo ny Kaomandin’ny borigadin’ny zandary a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fampiatoana eo amin’ny fitantanana ny Caf: nampiakatra fitsarana ambony amin’ny fiampangana azy i Ahmad
Tsy nipetra-potsiny. Nambaran’ny loharanom-baovao iray fa hampiakatra fitsarana ambony eo anivon’ny rafi-pitsarana misahana ny fanatanjahantena “Tribunal arbitral du sport” (TAS) ny filohan’ny Caf, i Ahmad Ahmad. Manana zo rahateo ny tenany ao anatin’ny 60 andro, hanao izany, araka ny voalazan’ny lalàna amam-pitsipika mifehy ny sehatry ny fanatanjahantena, indrindra fa ny baolina kitra. Midika ho antsojay ny fampiatoana azy amin’ny fitantanana ny Caf iny, raha ny fijeriny ka anton’izao tsy fanekena lembenana fotsiny, manoloana ilay sazy, araka ny fanapahana noraisin’ny Fifa, tamin’ny alalan’ny vaomieran’ny etika iny.Tsiahivina fa anisan’ireo kandidà matanjaka amin’ny fifidianana ho filohan’ny Caf ny tenany ary voalaza fa tsara toerana hitantana fanindroany izany. Voaporofon’ireo filohan’ny federasiona miisa 46 amin’ireo mpikambana 54 amin’ny fanohanana azy izany. Miankina amin’izao dingana fampiakarana fitsarana ambony izao anefa ny mbola haha kandidà azy na tsia.Synèse R. L’article Fampiatoana eo amin’ny fitantanana ny Caf: nampiakatra fitsarana ambony amin’ny fiampangana azy i Ahmad a été récupéré chez Newsmada.